निषेधाज्ञाले रोकेन संक्रमण « रिपोर्टर्स नेपाल
प्रकाशित मिति : 2020 September 17, 6:27 am
काठमाडौं, १ असोज । काठमाडौंसहित तीन दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाइए पनि कोरोना संक्रमण रोकथाममा त्यसको प्रभाव न्यून मात्रै देखिएको छ। निषेधाज्ञा जारी गरिएपछि संक्रमितको संख्या घट्नु साटो झन्डै दोब्बरले बढिरहेको छ।
इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले साउनभन्दा भदौमा मृत्युदर बढेको बताए। अहिले मृत्युदर ०.६ प्रतिशत छ। सरकारी अधिकारीले निषेधाज्ञाको प्रभावका कारण संक्रमितको संख्या घट्ने आशा व्यक्त गरेका थिए। तर, निषेधाज्ञाले उपत्यकामा संक्रमण विस्तारको ‘चेन ब्रेक’ गर्न नसकेको विज्ञले जनाएका छन्। दिनहुँ सबैभन्दा बढी संक्रमित काठमाडौं उपत्यकामा भेटिन थालेका छन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनीले नागरिकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगर्दा संक्रमण झन् बढेको बताए। ‘मास्क नलगाई र भौतिक दूरीसमेत कायम नराखी बिहान–बेलुका घुमिरहेका छन्’, डा। मरासिनीले भने, ‘त्यसले पनि संक्रमण बढाएको हो।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। गौतमले निषेधाज्ञाको प्रभाव सकारात्मक रहेको बताए। ‘निषेधाज्ञा नगरेको भए संक्रमणदर झन् बढ्थ्यो। निषेधाज्ञा गरेकै कारण निस्फिक्री हिंडडुल गर्न पाएनन्। त्यसैको नतिजा अहिलेको संक्रमणको अवस्था हो’, डा। गौतमले भने, ‘केही नगरेको भए संक्रमण झन् भयावह भइसक्थ्यो।’
आफू र आफ्नो परिवारको स्वास्थ्यका लागि उपत्यकावासी गम्भीर नदेखिएको प्रवक्ता डा। गौतमको भनाइ छ। ‘दिनहुँ अनुरोध गर्दा पनि नागरिकको बानी सुधार्न सकिएन’, उनले भने। रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार ६० वर्षभन्दा माथिका नागरिकमा संक्रमणदर सामान्य छ। २० वर्षभन्दा कम उमेर समूहका व्यक्तिमा पनि संक्रमण न्यून छ।
सरकारले बढ्दो संक्रमणको जोखिम घटाउन निषेधाज्ञाबाहेक अन्य कार्ययोजना अघि सार्नुपर्ने सुझाव विज्ञले दिएका छन्। नागरिकले घरमै बसेर सघाउँदा पनि सरकारले अन्य कार्ययोजना अघि ल्याएन। ‘निषेधाज्ञाका बेला काठमाडौं उपत्यकामा पीसीआर परीक्षणको दायरा विस्तार गर्नुपथ्र्यो। शंकास्पद र सम्भावित समूह एवं व्यक्तिहरूलाई परीक्षणको दायरामा ल्याएको भए संक्रमण बढी फैलने थिएन’, डा. मरासिनीले भने। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोस्टले छापेको छ ।